Vovoka 8-O-methylurolithin A tsara indrindra (35233-17-1) - Mpanamboatra sy ozinina
Cofttek no mpanamboatra vovoka 8-O-Methylurolithin tsara indrindra any Shina. Ny orinasanay dia manana rafitra fitantanana famokarana tanteraka (ISO9001 & ISO14001), miaraka amin'ny fahafaha-mamokatra isam-bolana 100kg.
Name: 8-O-methylurolithin A
Anarana simika: Methylurolithin A
Formula simika: C14H10O4
Meny fitetezana 242.227g
Color: Vovoka mavo maivana
Key InChi: /
Kaody SMILES: /
function: 8-O-methylurolithin A dia misy anti-inflammatoire, anti-oxidant, anti-cancer, hypoglycemic ary hetsika biolojika hafa.
fampiharana: 8-O-methylurolithin A dia voaporofo fa hamerina amin'ny laoniny ny autofagy mitochondrial ary hampihena ny fahanteran'ny hozatra.
Solubility: Soluble ao amin'ny DMSO (3 mg / mL)
Storage Temp: Maina, maizina ary amin'ny 0 - 4 C mandritra ny fotoana fohy (andro ka hatramin'ny herinandro) na -20 C mandritra ny fotoana maharitra (volana ka hatramin'ny taona).
Fizarana fandefasana: Nalefa tamin'ny haavo ara-pahasalamana ho fanafody tsy simika. Ity vokatra ity dia ampy ho an'ny herinandro vitsivitsy mandritra ny fandefasana tsotra sy ny fotoana laniana amin'ny Customs.